Xiaomi Mi 9S (5G) bụ nke TENAA kwadoro, ọ ga-ebupụta n'oge na-adịghị anya | Gam akporosis
Xiaomi Mi 9S (5G) ka TENAA kwadoro ma ga-ebido n’isi nso
Ọtụtụ ekwuola banyere mbata nke a Xiaomi Mi 9 na njikọta 5G. O yiri ka ụlọ ọrụ ahụ enweworị ya na mmepe ma ọ bụ, kama nke ahụ, ọ dịlarịrị njikere, ma nke ikpeazụ yiri ka ọ bụ ihe a na-ekwenye ekwenye karị ọnụ na-adịbeghị anya ndị 3C nke China nabatara ọnụ ahụ na, n’oge a, site n’aka TENAA, onye na-achịkwa China ọzọ.
Xiaomi na-elekwasị anya na netwọk 5G, ma yabụ chọrọ ịbụ otu n'ime ndị nrụpụta ama ama nwere ọnụnọ dị ukwuu na nke a. Ọ bụ ya mere na ọ na-arụ ọrụ na mwepụta nke mobiles n'ọdịnihu na nkwado njikọ dị otú a, ọ bụ ezie na mkpuchi 5G na-eji nwayọ nwayọ na-agbasa naanị na obodo na obodo ole na ole, ọ na-ekwe nkwa ọtụtụ ihe n'ọdịnihu, ebe ọ ga-adọrọ mmasị karịa ugbu a, mgbe ọ na-agaghị ekwe omume ịnweta ọnụ 5G.
Xiaomi Mi 9 5G - nke a na - akpọ Mi 9S site na ụfọdụ ndị isi - dị ntakịrị. Na nkọwa zuru ezu, ọ dị 8.95 mm, ma e jiri ya tụnyere 7.6 mm maka ụdị nke mbụ. Nke a ga - abụ iji nweta batrị batrị 4.000 buru ibu (3,300 mAh nke ekwentị ugbu a) nke ọ gbapụtara. Dị ka ozi enyere, ọ nwere ụgwọ ngwa ngwa nke 45 watts, nke na-anọchite anya mmụba dị ukwuu, ma e jiri ya tụnyere 27 watts nke Mi 9 na-akwado.
#Xiaomi # 5G # xiaomimi9
Ekwenyela na nọmba ekwentị Xiaomi Mi9 5G nke na-abịanụ M1908F1XE na TENAA.
Ọ ga-akwado 45W odori. pic.twitter.com/7Jra7dtsHr
- Onyekwere (@ifeanyi) August 9, 2019
Dabere na data TENAA, ihuenyo size na-nọ na ihe 6.39 sentimita asatọ diagonal, ma asịrị na-ekwu na mmelite ndị ọzọ na-emekwa, dị ka mkpebi QuadHD +, nke ga-abịa dochie FullHD + nke usoro ihe atụ ọkọlọtọ.
Ọzọkwa, A na-atụ anya na Xiaomi ga-eme ka chipset kwalite Snapdragon 855 + ma tinye OIS na igwefoto isi na azụ. Otu dị ka ya Mi Mix 3G, ọ ga-enwe oghere kaadi SIM abụọ (yana njikere abụọ).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Xiaomi Mi 9S (5G) ka TENAA kwadoro ma ga-ebido n’isi nso
Huawei Mate 30 ga-abata na September na ihe nhazi ọhụrụ
Emeela PUBG Mobile Lite n'ọtụtụ mba